10 တောင်ပိုင်းအီတလီခုနှစ်တွင်သွားရောက်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 တောင်ပိုင်းအီတလီခုနှစ်တွင်သွားရောက်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာများ
အဆိုပါ ပူနွေးသောရာသီဥတု သေးကျော်မဟုတ်ပါဘူး. အချိန်နှင့်ယခုလတောင်ပိုင်းအီတလီသို့သွားရောက်မယ့်အကြောင်းပြချက်ကောင်းနေဆဲရှိပါသည်! တောင်အီတလီမှာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိတယ်. တောင်ပိုင်းအီတလီမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးနေရာများပါဝင်သည်; သိသိသာသာကမ်းရိုးတန်း၏လှပသောပို်, စုံလင်သောကမ်းခြေမြင်ယောင်, ချစ်စရာကောင်းကမ်းရိုးတန်းကျွန်းများနှင့်သမိုင်းဝင်မြို့ကြီးများနှင့်မြို့ရွာတစ်ခုကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာချရုံမှကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းကျဉ်းမြောင်းဖို့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ် 10, ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာနေကြတယ် 10 တောင်ပိုင်းအီတလီမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးသောနေရာများ.
1. အဆိုပါ Amalfi ကမ်းခြေ
အဆိုပါသွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းမရှိဘဲအီတလီနိုင်ငံမှခရီးကဘာလဲ Amalfi ကမ်းခြေ? တောင်ပိုင်းအီတလီ၏ဤအထူးသဖြင့်ဒေသအလှဆုံးနှင့်ကမ္ဘာကျော်တစ်ခုဖြစ်သည်! နေပယ်လ်ကနေ Salerno မှဆန့်, အဆိုပါ Amalfi ကမ်းခြေကမ်းလှမ်းမှု အံ့သြဖွယ်ရှုခင်း, အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မြို့များကြောင်း တောင်တို့ပွေ့ဖက်, တချို့စိတ်ဝင်စားဖို့သမိုင်းဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုက်များ.
ဤသည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဒေသ ထိုကဲ့သို့သော Amalfi အဖြစ်အချို့သော idyllic ကမ်းရိုးတန်းမြို့များ features, Erchie, Minori နှင့် Positano - ဤမြို့ရွာတို့၌၎င်းစစ်ချီသီးနှံများကိုပုံကြောင့်ပေါင်းစုံရောင်စုံအိမ်များတစ်စီးရီးများ တောင်စောင်း နှင့်ရုပ်ပုံစုံလင်သောဓာတ်ပုံကိုအခွင့်အလမ်းများပေး.
ထို့အပွငျ, Ravello ထိုသို့သောဗီလာ Rufolo အဖြစ်ဆိုဒ်များပေး ပြိုင်ဘက်ကင်းအမြင်များ မြေထဲပင်လယ်ဖြတ်ပြီး.
Sorrento အဆိုပါခရီးသွားဧည့်နှစျသိမျ့အဖြစ်ထူးခြားတဲ့တွေ့ရသောသာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်အဟောင်းမြို့ရှိရောင်းချမည့်ပိုမိုမြင့်မားဆုံးကိုရှေးဟောင်းနှစ်ဦးစလုံးရှိပါတယ်. တစ်ဦးကကူးတို့ Capri ၏ကျွန်းမှဒီကနေအရွက်, ထိုသို့ပွန်ပေအဘို့ကြီးစွာသောချွတ်ခုန်အချက်ဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, Sorrento ကိုလည်းလူသိများ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်အစားအစာ, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကမ်းပါးနေရာ (အဘယ်သူမျှမကမ်းခြေသော်လည်း), တောင်ပေါ်က Vesuvius နှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမြင်များ.
ဤသည်အလယ်ခေတ်မြို့မြေထဲပင်လယ်၏ကျောက်တောင်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်နေရာယူထားသည်ကို. ၎င်း၏ ritzy ဆိပ်ကမ်းအီတလီနိုင်ငံထိပ်တန်းဟော့စပေါ့တစျဦးဖွစျသညျ. သင်ဒီမှာနေဖို့လိုလျှင် နွေရာသီကာလအတွင်း သငျသညျလုံခြုံရေးအတွက်ကြိုတင်ကောင်းစွာစာအုပ်ဆိုင်ရှိစေခြင်းငှါ သင့်ရဲ့ရှေးခယျြသောဟိုတယ် အခန်းပေါင်း Fast တက်စာအုပ်ဆိုင်အဖြစ်. ကျွန်ုပ်တို့သည်နွေးထွေးသောရာသီ၏အဆုံးရောကျခါနီးပွီအဖြစ်, သငျသညျနောက်ဆုံးမိနစ်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းနှင့်အတူအချို့သောကံရှိစေခြင်းငှါ!
တချို့ကအေးမြသမိုင်း, Paestum အီတလီမြေပေါ်တွင်တစ်မြို့ဖြစ်ပါသည်, သူတို့အီတလီ၏ဤအပိုငျးကိုထိန်းချုပ်၌ကျင်လည်သောအခါပေမယ့်ရှေးဟောင်းဂရိလူမျိုးတို့ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့! ထိုအခါကပင်လယ်၏ဘုရားပြီးနောက် Poseidonia အဖြစ်လူသိများခဲ့သည်.
တစ်ဦးတည်းဂရိဗိသုကာဒါသို့ကြောင်းထားရန်သေချာစေပါသွားရောက်ရကျိုးနပ်သည် သင့်ရဲ့ခရီးစဉ် သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ရန်ရှိသည်သောသုံးကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားဂရိဘုရားကျောင်းကိုသွားရောက်ခြင်းအပြင်. အသက်အကြီးဆုံး 550BC အကြောင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ (ပေးသို့မဟုတ်တစ်နှစ်ယူ) နှင့်အံ့သြဖွယ်သောအရာ Hera ၏ဗိမာနျတျောဖြစ်ပါသည်.
Salerno Paestum မှရထား
Paestum ရထားမှ Naples
ပေါင်ပေ Paestum မှရထား
5. တောင်ပိုင်းအီတလီခုနှစ်တွင်သွားရောက်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာများ: Naples
Naples, သို့မဟုတ်နာပိုလီ, အဘယ်အရာကိုဘာသာစကားအပေါ်မူတည်, အီတလီမှာတတိယအကြီးဆုံးသောမြို့ဖြစ်၏. ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်, တောင်ပိုင်းအီတလီ၏ဤအပိုငျးအပေါ်အချို့သောအလွန်ဆန့်ကျင်အမြင်များရှိပါတယ်. အခြို့သောကြောင့်ကြီးမားသောဖြစ်ပါသည်, ညစ်ညမ်းသော, ရာဇဝတ်မှုစီးနှင့်ပြိုကွဲ, အခြားသူများကတုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်းနှင့်လေထုဖြစ်ပါသည်. နောက်ကျောကသင်၏ဆံပင်မှုတ်ဘာပဲ, ကျနော်တို့ခန့်မှန်း? အရာတစ်ခုမှာသော်လည်းသေချာသည်. ဤသည်ကမ်းရိုးတန်းတောင်ပိုင်းမြို့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိပြီး!
များသော အကြိုက်ဆုံးအီတလီအစားအစာများ ဝေါဟာရ နေပယ်လ်နှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင် ထိုကဲ့သို့သောပီဇာအဖြစ်ဒေသများ, နှင့် spaghetti. ဤရွေ့ကားဟင်းလျာများဒီနေရာမှာအလေးအနက်ထားနှင့်များသောအားဖြင့်လတ်ဆတ်တဲ့ feature နေကြတယ်, ဒေသအလိုက်စိုက်ပျိုးပါဝင်ပစ္စည်းများ. ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှု နေပယ်လ်အတွက်ကြီးမားတဲ့ပါဝင်သည် အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်, နယူး Castle, အဖြစ်ကောင်းစွာ Castel del Ovo ၏အိုင်နားခံတပ်အဖြစ်. အဆိုပါမြို့ကိုလည်း Vesuvius ဘေးတွင်ဖြစ်ပါသည်, ဥရောပတိုက်ကြီးပေါ်တွင်သာတက်ကြွစွာမီးတောင်.
6. တောင်ပိုင်းအီတလီခုနှစ်တွင်သွားရောက်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာများ: Alberobello
ကအီတလီနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့၌တွေ့ခံရဖို့ Trulli ဗိသုကာရဲ့အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားဥပမာကြောင်းအတွက် Alberobello မြို့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါသည် (ကောင်းစွာ, ဒါကြောင့်ငါကြားပြောလေ၏).
အဆိုပါ Trulli စတိုင် built-in နေအိမ်များမော်တာမသုံးဘဲ conical သောကျောက်ခေါင်မိုးနှင့်အတူထားကြပါတယ် (သော်လည်း, ငါမဆောက်ဒါကြောင့်ငါ့ကိုကိုးကားကြဘူးငါ). အသက်အကြီးဆုံးအိမ်များ 14 ရာစုကနေချိန်းတွေ့ကြနှင့် လုံးဝရင်သပ်ရှုမောဖွယ်, ထိုသို့တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်များထဲမှအောင်နှင့် လှပသောမြို့ရွာ သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့တောင်ပိုင်းအီတလီမှာ.
Fasano ရထားမှ Taranto
7. တောင်ပိုင်းအီတလီခုနှစ်တွင်သွားရောက်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာများ: Tropea
ကြည့်ရှု, ကျွန်မကြိုတင်၌သင်တို့ကိုသတိပေးနေပါတယ်. ဤအရပ်ဌာန၌အဆိုပါဓာတ်ပုံကိုအခွင့်အလမ်းများကိုရူးများမှာ. သင်အမှန်တကယ်အရာပေါ်ထွက်လက်လွတ်မသတိထားပါ! Tropea ၏လှပသောရှေးဟောင်းမြို့အချို့သက်သက်ချောက်ကမ်းပါးထိပ်ပေါ်မှာနှင့်တစ်ဦးအနေဖြင့်လမ်းကိုဖြတ်ပြီးဆောက်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ် ကျဉ်းမြောင်းတဲ့သဲကမ်းခြေ, က Hercules ကိုယ်တော်တိုင်ကတည်ထောင်ခဲ့ကြဟု.
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် အပန်းဖြေ, နှစ်ခုရှိတယ် အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အသင်းတော်များ Tropea လွန်းအတွက်, ကို Santa မာရီယာ del Isola siltation နှစ်ပေါင်းများစွာပေမယ့်ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အလယ်ခေတ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကျွန်းနှင့်ပြည်မကြီးအကြားဖွဲ့စည်းသောပြည်တံတားဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည်ဖြစ်ပါတယ်. အခြားဘုရားကျောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်; ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုအသင်းတော်တံခါးကိုအပြင်ဘက်တွင်ထိုင်လျက် WW2 ကနေချိန်းတွေ့နှစ်ခုပေါက်ကွဲဗုံးရှိပါတယ်. ဒေသခံများအဆောက်အဦးဒီတော့သင့်ရဲ့ခြေလှမ်းကိုစောင့်ကြည့်သည့်နာယကသူတော်စင်ဖြင့်ကာကွယ်ထားခံခဲ့ရသည်ဟုယုံကြည်!
Vibo Marina Tropea ရထားမှ
Tropea ရထားမှ Catanzaro
Cosenza Tropea မှရထား
Lamezia Terms Tropea ရထားမှ
8. တောင်ပိုင်းအီတလီခုနှစ်တွင်သွားရောက်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာများ: Capri
နည်းပညာပိုင်းအသေးငယ်တဲ့ကျွန်း, Capri သင်လေ့လာစူးစမ်းဖို့ရှိသည်တဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မြို့နှင့် Marina ရှိပါတယ်. မြေတပြင်လုံးကျွန်းဖြစ်ပါတယ် သမိုင်း၌ငွေရတတ်သော ဒဏ္ဍာရီနှငျ့သငျသညျ့အခါဒေသတွင်း၌သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ရှိသည်တဦးတည်းချစ်စရာကောင်းတဲ့အစက်အပြောက်များနှင့်.
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်သောအရာတို့ကိုရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, ရောမဧကရာဇ်တိဗေရိ၏အိမျ (ဗီလာ Jovis) ဆဲကျွန်းပေါ်တွင်ကြည့်ရှုရန်အဓိကအစက်အပြောက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်နှင့်ဒါအပြာရောင် Grotto ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါကမ်းနားဂူသာဖြစ်ပါသည် လှေဖြင့်သုံးစွဲနိုင် သာကိုင်သာရှိတဲ့ဒီရေရှိပါတယ်တဲ့အခါမှသာ (ဒါကြောင့်ဖျက်သိမ်းမှုအဘို့ပြင်ဆင်ရမည်).
9. တောင်ပိုင်းအီတလီခုနှစ်တွင်သွားရောက်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာများ: ပွန်ပေနှငျ့ဟာကြူ
ပွန်ပေ နှငျ့ဟာကြူတောင်ပေါ်မှာ Vesuvius ပြန်အပေါင်းတို့၌လမ်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အခါဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်နှစ်ခုရောမမြို့များနှင့်ကျေးရွာများဖြစ်ကြသည် 79 အေဒီ.
ဖြစ်ကောင်းနှစ်ခု၏အကျော်ကြားဆုံးပွန်ပေမြို့ဖြစ်ပါသည်, ရာယခုသင်တဝိုက်လှည့်လည်ခြင်းနှင့်သင်ဧရိယာထဲမှာအခါစူးစမ်းလေ့လာလို့ရပါတယ်. တစ်ဦးရွားလှ 3,000 လူများတို့သည်မြို့ထဲတွင်ပျောက်ပျက်, ဒါပေမယ့်ပူပြာကယနေ့ကဘာလဲဆိုတာစအပျက်အယွင်း immortalized. သတိပေးခဲ့သည်ခံရ, ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတော်တော်အလုပ်ရှုပ်ရနိုင်, အညီအစီအစဉ်ဒါနှငျ့သငျရိုက်ထည့်ဖို့လက်မှတ်ဘို့တန်းစီဖို့ရှိသည်မယ်သတိရ.
Oh, ဒါ့အပြင်ဟာကြူ၏အနီးအနားမြို့သေးငယ်ပြီးချမ်းသာခရိုင်နှင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝရောတစ်ချိန်ကနေထိုင်ခဲ့မည်သို့ဥပမာတစ်ခုပေးသည်. သင်တစ်ဦးသမိုင်းရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်ကြောင်းလျှင်ဟာကြူရှေးဟောင်းသုတေသနဧရိယာသွားရောက်သေချာအောင်လုပ်ပါ!
10. တောင်ပိုင်းအီတလီခုနှစ်တွင်သွားရောက်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာများ: Aeolian ကျွန်းများ
တောင်ပိုင်းအီတလီမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးနေရာများကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းတွင်နောက်ဆုံး. အဆိုပါ Aeolian ကျွန်းများ! သူတို့ကအီတလီနိုင်ငံရဲ့ဟာဝိုင်ယီအဖြစ်လူသိများကြသည်. ဒါဟာမြောက်ဘက်စစ္စလီကျွန်း၏ကျွန်းများတစ်ဦး string ကိုဖြစ်ပါတယ်, ထိုသို့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ရီစရာဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကဲ့သို့အံ့သြဖွယ်, ခဲမည်သူမဆိုအကြောင်းကိုသိတယ်. သို့သော်လုပ်ပေးသူပြန်လာမယ့်စောင့်ရှောက်. သူတို့အားလုံးသူတို့ကိုယ်သူတို့ဖို့နေရာရှိသည်လိမ့်မယ်သိသောကြောင့်.
လှပသောအနက်ရောင်ကမ်းခြေတဝိုက် ZIP မှဆိုင်ကယ်ငှားရမ်း. Pollara အတွက်နေဝင်ချိန် aperitivo. Stromboli ၏ပတျဝနျးကငျြကျွန်းများတဝိုက် Boating, Panarea, နှင့် Lipari. မီးတောင်အတွက်ဆာလ်ဖာရေ Spa မ်ားနှင့်အတူရနှေးငှေ့မြားသောရယူခြင်း. ဂရိ Vibe (အံ့အားသင့်ခြင်းမရှိ - ကျွန်းများ Aeolus များအတွက်အမည်ရှိခဲ့ကြသည်, လေ၏ဘုရား, ဂရိအခြေချနေထိုင်သူများအားဖြင့်). ဆားကမ်းနားဆင်းဖိတ်အိမ်များဆုတ်ယုတ်လာခဲ့သည်. ထိုအသင်သည်သင်၏ချစ်ရသူနဲ့သင်သာဘာတစ်ခုမှဝေစုဟာကြီးမားတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပေါ်၌ရှိကြ၏နဲ့တူခံစား!
တောင်ပိုင်းအီတလီ၏ခရီးစဉ်အဘို့သင့်အိတ်ထုပ်ပိုးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေ? ထိုအခါနှင့်သင်၏ရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင် တစ်ဦးကရထား Save မိနစ်အတွင်း. အဘယ်သူမျှမပိုဝန်ဆောင်ခ, အဘယ်သူမျှမပျော့သွားတာကို, ပဲပျော်စရာ!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 တောင်ပိုင်းအီတလီခုနှစ်တွင်သွားရောက်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာများ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-places-visit-south-italy/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#ဟံသာဝတီ #တောင်အာဖရိက #နွေရာသီ #TrainTravelItaly italyvacation ရထားခရီးစဉ်